मूल्य जोखीम व्यवस्थापन | गृहपृष्ठ
Home लगानी मूल्य जोखीम व्यवस्थापन
on: May 04, 2014 लगानी
मूल्य जोखीम व्यवस्थापन
गत मङ्सिरमा छोरीको बिहेको चटारोमा रहेका बेला सुनको मूल्य अझै बढ्ने डरले रामकृष्ण सुब्बाले हतारमा प्रतितोला रू. ६१ हजार ८ सय ५० दरले १० तोला सुन किने । तर, २–४ दिनमै सुन प्रतितोला रू. २ हजार ५ सय घट्यो । केही दिनमात्र पर्खेको भए उनको रू. २५ हजार जोगिने रहेछ । यो त एक उदाहरणमात्र हो । विदेश जाँदा, ट्राभल चेक बनाउँदा होस् वा विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउँदा, यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन् । संयोगले कहिलेकाहीँ फाइदा पनि भएको होला, तर बजारको बारेमा थोरैमात्र पनि जानकारी लिने हो भने राम्रै फाइदा लिन सकिन्छ ।
हामी दिनहुँ विभिन्न वस्तु खरीद गर्छौं । त्यसको भुक्तानी मुद्रामा गर्छौं । उक्त वस्तु र मुद्रा दुवैकोे मूल्यमा परिवर्तन भइरहन्छ, जसको निर्धारण वस्तु तथा मुद्रा विनिमय बजारमा हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा वस्तु बजारको कारोबारलाई सट्टाबाजीको रूपमा मात्र अधिकांश मानिसले बुझ्ने गरेका छन् । जोखीम लिन चाहने र सक्नेलाई मात्र यो बजारको ज्ञान चाहिन्छ भन्ने भ्रम रहेको छ । ती वस्तु र मुद्राको मूल्यले हाम्रो दैनिकीलाई पार्ने प्रत्यक्ष असरबारे हामी कमै चासो दिन्छौं । वस्तु र मुद्राले घेरिएको हाम्रो दैनिकी सामान्य जानकारीले सहज, योजनाबद्ध र फाइदाजनक हुन सक्दछ ।
नेपालमा सुनचाँदीको मूल्य तथा विनिमय दर सामान्यतया दिनमा एकपटक मात्र अन्तरराष्ट्रिय बजारअनुसार समायोजन गर्ने गरिएको पाइन्छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भने एक सेकेण्डमै अर्को नयाँ मूल्यको सृजना हुन सक्दछ । उक्त प्रक्रिया निरन्तर रूपमा चलिरहन्छ र मूल्यमा निरन्तर रूपमा परिवर्तन भइरहन्छ, जसका कारण नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्यमा भएको परिवर्तनलाई समायोजन गरी नयाँ मूल्य प्रकाशित हुनुपूर्व नै निर्धारण हुने नयाँ मूल्य सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले दिउँसो ११–१२ बजे अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्यअनुसार समायोजन गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गर्छ । गहना व्यापारीले नयाँ मूल्य आएपछि मात्र नयाँ मूल्यमा कारोबार गर्दछन् । त्यसैले, यदि सुन किन्ने तयारी गर्ने हो भने बिहान १० बजेतिर अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यको उतारचढाव हेर्नुपर्छ । अनि त्यसको आधारमा सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले निर्धारण गर्न सक्ने मूल्यको आँकलन गर्न सकिन्छ । यदि नयाँ मूल्य घट्ने देखियो भने दिउँसोको १–२ बजेपछि खरीद गर्दा र यदि बढ्ने देखिएमा बिहानै ११:००–११:३० भन्दा अगाडि खरीद गर्दा फाइदा हुन्छ । नेपाली सुन बजारमा सुनको मूल्यमा भोलिपल्टै प्रतितोला २ हजारदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँभन्दा बढीको समेत फरक भएको देखिएको छ । त्यस्तो समयमा यो सामान्य जानकारीले पनि राम्रै फाइदा पुर्‍याउन सक्दछ । यो उपाय सुनचाँदीको खरीदमा मात्र नभई विदेशी मुद्रा विनिमयमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस किसिमको फाइदा हाम्रो बजार राम्रोसँग विकसित नभएका कारण सृजना भएको हो । तर, अन्तरराष्ट्रिय बजारको मूल्यलाई समेत विश्लेषणका विभिन्न तरीका अपनाई भविष्यमा देखिन सकिने मूल्यको प्रवृत्ति पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । साथै, सम्भावित अधिकतम मूल्य र न्यूनतम मूल्यको समेत अनुमान गर्न सकिन्छ ।
मूल्यको उतारचढावलाई आँकलन गर्ने विश्लेषणात्मक तरीकालाई आधारभूत विश्लेषण र प्राविधिक विश्लेषण गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । आधारभूत विश्लेषणका तरीकाहरूमा वस्तुको माग र आपूर्तिलाई प्रभाव पार्न सक्ने पक्षहरूको विश्लेषण गरिन्छ । प्राविधिक विश्लेषणमा भने वस्तुको ऐतिहासिक मूल्यहरूको विश्लेषण गरिन्छ । आधारभूत विश्लेषणबाट वस्तुको मूल्यको प्रवृत्तिको बारेमा जानकारी लिन सकिन्छ भने प्राविधिक विश्लेषणको सहयोगले कुन मूल्यमा खरीद गर्ने र बेच्ने भन्ने जानकारी लिन सकिन्छ । प्राविधिक विश्लेषणबाट आधार मूल्य र रोक मूल्य थाहा पाउन सकिन्छ । आधार मूल्य त्यो बिन्दु हो, जहाँबाट मूल्य फेरि बढ्न सक्दछ भने रोक मूल्य त्यो बिन्दु हो, जहाँबाट मूल्य घट्न सक्दछ । आधारभूत विश्लेषण समाचारहरूलाई आधार बनाई गरिन्छ भने प्राविधिक विश्लेषणका थुप्रै तरीका छन् । प्राविधिक विश्लेषण गर्नका लागि सफ्टवेयरमा वस्तुको मूल्यसम्बन्धी विभिन्न चार्ट सृजना गर्ने तथा रेखाङ्कन गर्ने सुविधा उपलब्ध हुन्छन् ।
यस्ता विश्लेषणबारे राम्रो जानकारी भएमा न्यूनतम मूल्यमा खरीद र अधिकतम मूल्यमा विक्री गरी व्यक्तिगत रूपमा फाइदा लिन सकिन्छ । साथै, यसको ज्ञान बहुउपयोगी रहेको छ । वस्तु तथा शेयर बजारमा लगानी गर्नका साथै व्यापार–व्यवसायको राम्रो सफलताका लागि समेत यो त्यत्तिकै उपयोगी रहेको छ । वस्तु तथा मुद्राको मूल्यको उतारचढावले व्यापार–व्यवसायमा ठूलो प्रभाव पार्दछ । त्यसैले, व्यापार–व्यवसायको राम्रो सफलताका लागि यसको जानकारी आवश्यक रहन्छ ।
वस्तु बजारमा कारोबार हुने सुनचाँदीजस्ता महँगा धातुदेखि तामा, जिङ्कजस्ता औद्यौगिक धातुको कारोबार गर्ने व्यवसायीले वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढव बाट सृजित जोखीम न्यूनीकरण गर्न वस्तु बजारमा हेजिङ गर्न सक्दछन् । साथै, मूल्यको उतारचढावको विश्लेषणबारे ज्ञान हासिल गरी वस्तुको मूल्य न्यून रहेको बेला खरीद गरेर पनि फाइदा लिन सक्दछन् । त्यसैगरी, नेपालमा अन्य थुप्रै लत्ता–कपडा, विद्युतीय सामग्रीलगायत अन्य वस्तुसमेत आयात हुन्छन् र त्यसको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा हुन्छ । मुद्राको डेरिभेटिभ कारोबार नेपाली बजारमा उपलब्ध नभएका कारण मुद्राको मूल्यमा हुने उतारचढवबाट सृजना हुने जोखीम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्न त सकिँदैन । तर, भुक्तानी गर्नुपर्ने मुद्राको मूल्य न्यून रहेको बेला भुक्तनी गरी फाइदा लिन सकिन्छ ।
(लेखक मर्कण्टाइल एक्सचेञ्ज नेपाल लिमिटेडमा आबद्ध छन्)